Ahoana no fomba hametrahako jiro mitongilana hahafahako mamindra azy ireo mankany amin'ny iray hafa - MediaLight Bias Lighting
Ahoana no fomba hametrahako jiro mitongilana mba hahafahako mamindra azy ireo amin'ny fahitalavitra hafa (na manala azy mora foana amin'ny ho avy)?
MediaLight sy LX1 Bias Lights dia tohanan'ny 3M VHB (Very High Bond) adhesive. Ity dia lakaoly mahery ary nataonay niverina ny adhesive 3M tamin'ny volana Aogositra 2017, rehefa nanomboka nianjera tamin'ny LG OLED vaovao indrindra ary koa ny fampisehoana Samsung vaovao isan-karazany ny sehatra MediaLight. Raha ny marina ara-bakiteny, ny mpanjifa dia mampiditra jiro amin'ny hariva ary mifoha mahita ireo jiro ao amin'ny antontam-bato. Tsapanay fa mila manavao ny doka izahay.
Miaraka amin'ny VHB dia tsy mitranga intsony izany (matanjaka tokoa ny kasety adhesive ka ampiasaina hamatsiana varavarankely sy vy amin'ny Burj Khalifa any Dubai). Na izany aza, miteraka fanontaniana maro toy ny:
"Ahoana no fomba hanesorako ny jiro bias amin'ny fahitalavitra?
"Ahoana no fomba hametrahako jiro miandalana?"
"Ahoana no hamindrako jiro mitongilana amin'ny fahitalavitra hafa?"
"Ahoana no hanesorako ny sisa tavela amin'ny jiro?"
Ny olona sasany dia mampiasa kasety hosodoko hampidirana jiro. Ny sasany kosa mampiasa kasety elektrika. Hitanay fa maro amin'ireo mpampiasa matihanina no mampiasa gaffer tape, izay, ekena, mpampiasa marobe ao an-trano no tsy mipetraka.
Mifanaraka amin'ny tanjonay amin'ny fivoarana tsy tapaka ny elanelam-bokatra, dia manolotra horonam-peo horonam-peo kely maimaim-poana izahay miaraka amin'ny fividianana MediaLight na LX1. Ny hany ilainao dia ny mampiditra azy amin'ny baiko ary ny sarany $ 3.50 mahazatra (izay misy ny fandefasana ho an'ny baiko irery - ny sarany dia kely noho ny vidin'ny paositra) dia avela.
Tsindrio eto raha haka kasety gaffer maimaim-poana miaraka amin'ny jironao!
Heverinay fa tena mora ampiasaina amin'ny teatra an-trano ny kasety gaffer, na ampiasaina hampiasa jiro fitongilanana na hanampiana ireo tariby tsy voafehy. Ary ho an'ireo mpampiasa matihanina, mieritreritra izahay fa ny mini-horonan-taratasy dia tonga lafatra ho an'ny kitapo, kitapo fakan-tsary na kitapo laptop. Amin'ny haben'ny horonan-kasety elektrika dia mety kokoa noho ny mametaka horonan-tsarimihetsika gaffer goavana.
Previous lahatsoratra Fa maninona no tsy amidy amin'ny Amazon.com ny MediaLight?
Next lahatsoratra Miresaka momba ny jiro fitongilanana ao amin'ny fantsona Murideo